KhitLuNge - Page4of 88 -
လူနာအမှတ် ၈ရဲ့ခရီးသွားနေရာပြင်သစ်ဧည့်သည်များနှင့် သွားခဲ့တဲ့ နေရာများ . . .
လူနာအမှတ် ၈ရဲ့ခရီးသွားနေရာပြင်သစ်ဧည့်သည်များနှင့် သွားခဲ့တဲ့ နေရာတွေကတော့ . . ၁။#ပုဂံ ၂။#အင်းလေး ၃။#ကေလာ ၄။#ပင်းတယ ၅။#မုံရွာ ၆။ပခုက္ကူ …
ကိုဗစ်ရောဂါ တွေ့ရှိရသူ ဧည့်လမ်းညွှန် အမျိုးသမီး နေထိုင်ရာ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ နေအိမ်ကို Lock Down ချ အိမ်သားများကိုလည်း Home Quarantine လုပ်ဆောင်
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၈ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ရောဂါတွေ့ရှိရသော ၈ ဦးမြောက် လူနာဖြစ်သည့် အသက် ၆၀ နှစ်အရွယ် ဧည့်လမ်းညွှန် …
အတည်ပြုလူနာ နံပါတ် (၈) CCTV မှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်သောအခါ . . .
Breaking News Zawgyi အတညျပွုလူနာ နံပါတျ (၈) သညျမန်တလေးမွို့၏ လူစုလူဝေးအကွီးမားဆုံး မဟာအောငျမွကြေောကျဝိုငျးသို့ လာရောကျလညျပတျခဲ့သညျဟု ပါရှိသဖွင့ျ ၎င်းငျးနေ့က …
သြင်္ကန်ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း ခရီးသွားများ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ရေး ယာဉ်အသင်းများက ဆောင်ရွက်ပေးမည်
သြင်္ကန်ရုံးပိတ်ရက်ရှည်ကာလအတွင်း မန္တလေးမြို့မှ နေရပ်အသီးသီးသို့ ပြန်ကြမည့် ဝန်ထမ်းများ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ခရီးသွားပြည်သူများ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်စေရေးအတွက် ယာဉ်အသင်းများမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် …
ဘယ်အာဟာရတွေ ဘယ်လောက်ပဲအစွမ်းထက်ပါတယ်ပြောပြော ကလေးတွေအတွက်ဆို မိခင်နို့ရည် က တန်ဖိုးအရှိဆုံးပါပဲ။ မိခင်နို့မှာ ကလေးအတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့အာဟာရတွေပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်တွေ၊ …
ခါးလှည့်ကွင်း ကနေရနိုင်မယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ။ ။
ခါးလှည့်ကွင်းကို လူတိုင်းသိကြတယ်ဟုတ်။ ကွင်းကြီးကြီးဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ ခါးမှာလှည့်ရတဲ့ ဟာလေးလေ။ ဒီ ခါးလှည့်ကွင်းကို ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားစရာအဖြစ် ကစားကြသလို ကြီးလာတော့လည်း သူက …
သွေးပျစ်တဲ့ပြဿနာကို အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ။ သူ့ဘာသာသူဆို ပြဿနာမဖြစ်တတ်ပေမယ့် ဒီလို သွေးပျစ်တဲ့ပြဿနာခံစားနေရတဲ့သူတွေဟာ နောက်ပိုင်း ကြာလာရင် သွေးကြော တွေထဲ သွေးခဲတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်၊ သွေးကြောတွေပိတ်သွားတတ်လို့ …
တစ်နေရာတည်းအကြာကြီးထိုင်ခြင်းဟာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကဲ့သို့ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်
တစ်နေရာထဲမှာ အချိန်ကြာကြာ ထိုင်ခြင်းဟာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒီစကားက အရမ်းကြီး ချဲ့ပြောတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ယိုယွင်းစေပြီး သေစေနိုင်တဲ့ …
ဖုန်းဘေးနားထားပြီး ညအိပ်တတ်သူများနဲ့ ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်
မျက်မှောက်ကာလဟာ သတင်းနဲ့နည်းပညာခေတ်ကြီး ဖြစ်နေတာနဲ့အမျှ လူတိုင်းကိုယ်စီမှာ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးတော့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ထို့အတူစွာပင် ဖုန်းဟာလည်း ကိုယ်နဲ့မကွာ အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ …
ဆီးကျောက်တည်ခြင်းကို ဒီနည်းလမ်းနဲ့ အပြီးတိုင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ
ကျန်းမာရေးစစ်တမ်းများအရ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ သုံးဦးတွင် တစ်ဦးက ဆီးကျောက်တည်သည့် ဝေဒနာခံစားနေရတယ်လို့ တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဆီးကျောက်တည်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးရတဲ့ လူအရေအတွက်ဟာ ရင်သားကင်ဆာ၊ ပရော့စတိတ်ကင်ဆာကြောင့် …